Wepasi rose wekutumira sevhisi Agent | China Yepasirese kutumira basa seSouring & Trader
China Kuzadzikiswa Service
Amazon FBA YOKUTANGA LEG KUZADZISWA Kutumira kuAmazon FBA imba yekuchengetera inoverengerwa seB2B kupinza kunzvimbo yekuenda. Uri kunze kweChina here kuda kutumira hesheni kuazon imba yekuchengetera? Iwe unogona kushushikana kuti vagadziri havambogadzi kugadzirira FBA kutumira uye iwe unofanirwa kutsanangura zvakare uye zvakare. Zvakare iyo yekunze kupinza iri yakaoma uye inogara iri dambudziko remusoro. Iye zvino tauya kuzokubatsira kunze. Isu tinopa vatengi vane mutyairi pick-up sevhisi mumaguta makuru muChina, pr ...
Direct Line Nekushandira pamwe neHongkong yakagadzikana nendege masosi uye epasi anotungamira zvigadzirwa zvekutakura zvinhu munyika dzeEurope neUS, SunsonExpress Direct Line mubatanidzwa wekuratidzira uye wepositi sevhisi muDDP (Zivisa Duty Paid) maitiro. Isu tinoshandisa yakananga kutiza kubva kuHongkong kuenda kune yekuenda gedhi zuva rega rega uye tinobata iwo iwoyo iwoyo tsika chibvumirano. Iyo 100% yakazara inodzora pamhepo kutakura uye yekupedzisira mamaira kuendesa inowanikwa inova mhinduro yehupfumi nekukurumidza kuendesa iyo iri kunyanya d ...
Postal Shipping Solution Isu tinonyatsonzwisisa mhinduro yeposvo inogara iri sarudzo yekutanga kune e-commerce bhizinesi sezvo ichifarira mwero wakaderera. Kugutsikana kwakasiyana kwemutengesi, isu tinoshanda nemahofisi eposvo mazhinji mumakore apfuura uye tinoramba tichibvisa basa rakaipa nguva nenguva. Iye zvino vamwe vese ndivo vakanyanya kunaka. China Post China Post yakakamurwa kuita mapasuru epasi uye mapasuru akanyoreswa. Iyo yepasi rese pasuru sevhisi yemapasuru anorema isingasviki 2KG. China ...
Express Service Ship ine yako pachako Express account inodhura zvakanyanya? Saka wadii kutumira nechidimbu chedu? Isu tinopa vatengi kuratidza sevhisi seDHL, UPS uye EMS pamitero yakadzikiswa. Kukurumidza kuendesa pamitengo yezvehupfumi, iwe unofanirwa kuishandisa. DHL inotsigirwa neDeutsche Post DHL, rinozivikanwa pasi rese repositi uye logistics boka. Inonyanya kusanganisira anotevera mabhizimusi mayuniti: DHL Express, DHL Global Forwarding, Freight uye DHL Supply Chain. Muna 1969, DHL yakavhura yavo yekutanga expre ...